Imaaraadku waxay dib u bilaabaan duulimaadyadii Mauritius, maaddaama jasiiraddii dib loo furay dalxiisayaashii caalamiga ahaa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mauritius » Imaaraadku waxay dib u bilaabaan duulimaadyadii Mauritius, maaddaama jasiiraddii dib loo furay dalxiisayaashii caalamiga ahaa
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Raaxada • Wararka Mauritius • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta • Wararka kala duwan
Laga bilaabo 15 Luulyo ilaa 30ka Sebtember 2021, Mauritius waxay xuduudeeda u furi doontaa rakaabka la tallaalay iyo muwaadiniinta Mauritius.
Emirates waxay ku shaqayn doontaa laba duulimaad oo toddobaadle ah Mauritius laga bilaabo 15ka Luulyo.
Shirkaddu waxay diyaaraddeeda Airbus A380 geyn doontaa meelaha caanka ah ee Badweynta Hindiya laga bilaabo 1da Ogosto.
Socotada si buuxda loo tallaalay waxay ku raaxaysan karaan nasasho iyo nabadgelyo.
Emirates ayaa ku dhawaaqday inay dib u bilaabi doonto adeegyadii rakaabka ee Mauritius xagaaga iyada oo laba duulimaad oo toddobaadle ah laga bilaabo 15ka Luulyo, iyada oo jasiiradda-dalku si tartiib tartiib ah dib ugu furtay xudduuddeeda dalxiisayaasha caalamiga ah. Si ay ugu adeegto baahida suuqa, diyaaradda ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay geyn doonto astaanteeda Emirates Diyaaradda A380 oo u socotay Mauritius laga bilaabo 1da Ogosto. Socotada si buuxda loo tallaalay waxay ku raaxaysan karaan nasasho iyo nabadgelyo-ka-helitaan liis ah hoteello nabdoon oo horay loo ansixiyey COVID-19 oo ku baahsan jasiiradda.
Duulimaadyada Emirates ee Mauritius waxay shaqeyn doonaan Khamiista iyo Sabtida. Laga bilaabo 15 Luulyo, waddada waxaa la adeegsan doonaa iyadoo la adeegsanayo a Boeing 777-300ER diyaaradaha, iyo laga bilaabo 1da Ogosto, iyadoo la isticmaalayo diyaaradda Emirates A380. Duullimaadka Emirates EK 701 wuxuu ka tagi doonaa Dubai 2: 35hrs wuxuuna imaan doonaa Mauritius 9: 10hrs waqtiga maxalliga ah. Duulimaadka soo laabashadu wuxuu shaqayn doonaa Jimcaha iyo Axadaha. Duullimaadka Emirates EK 704 wuxuu ka tagi doonaa Mauritius 23: 10hrs wuxuuna imaan doonaa Dubai 5: 45hrs waqtiga maxalliga, maalinta xigta.
Waayo -aragnimada Emirates A380 ayaa weli ah midka ugu jecel safrayaasha guryahooda ballaadhan oo raaxo leh waxayna diyaaraddu sii wadi doontaa inay ballaariso hawl -galkeeda si waafaqsan tartiib -tartiib ku soo noqoshada baahida. Emirates hadda waxay ku shaqeysaa A380 New York JFK, Los Angeles, Washington DC, Toronto, Paris, Munich, Vienna, Frankfurt, Moscow, Amman, Qaahira, iyo Guangzhou.
Laga soo bilaabo xeebaha bacaadka cad, biyaha cad, iyo muuqaalka qurxoon - Mauritius ayaa weli ah meelaha loo dalxiis tago ee ugu caansan, oo soo jiita dadka socotada ah ee Ameerika, Yurub, iyo Bariga Dhexe. Rakaabka Emirates ayaa sidoo kale ku raaxaysan kara meelaha kale ee Badweynta Hindiya, maaddaama ay shirkaddu 28 duulimaad toddobaadle ah siiso Maldives iyo toddoba duulimaad toddobaadle ah oo ku aaddan Seychelles.
Laga bilaabo 15 Luulyo illaa 30ka Sebtember 2021, Mauritius waxay u furi doontaa xudduuddeeda rakaabka la tallaalay iyo muwaadiniinta Mauritius. Socotada si buuxda loo tallaalay waxay ku raaxeysan karaan “fasaxa hoteelka” waxayna ka dooran karaan liis ballaaran oo hoteello la oggolaaday oo ku yaal jasiiradda oo dhan. Laga bilaabo 1da Oktoobar, Mauritius waxay bilaabi doontaa inay soo dhoweyso socdaalayaal si buuxda loo tallaalay kuwaas oo si xor ah u baari kara jasiiradda iyadoon wax xannibaad ah lahayn.